जमराको जुस : खाने कसरी, फाइदा गर्छ के ? | Ratopati
जमराको जुस : खाने कसरी, फाइदा गर्छ के ?
भिटामिन र खनिजतत्त्वहरुको भण्डार हो जमराको जुस : मिलाएर खान जाने फाइदा पनि गर्छ
personसुनिता न्यौपाने exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १४, २०७५ chat_bubble_outline1
हरेक सिक्काका दुई पाटाहरु हुन्छन्ः यो नेपालमा आम रुपमा प्रचलित भनाइ हो । जमराको जुसको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । रातोपाटीमा केही दिनअघि हामीले जमराको जुसको बारेमा एक सामग्री प्रकाशित गरेका थियौं, जसमा आम मानिसमा बढ्दो जमराको जुस सेवनको प्रचलन तथा त्यस सेवनले कलेजोका रोगीहरुमा नकारात्मक असरबारे विशेषज्ञ चिकित्सक प्रा.डा. सुधाम्सु केसीका विचारहरु प्रकाशित गरेका थियौं ।
निश्चय पनि, रोगको उपचारको सन्दर्भमा जमराको जुसको सेवनले गर्ने फाइदा बेफाइदाबारे विशेषज्ञ चिकित्सकले भनेको कुरा सुन्नैपर्छ । त्यो उहाँहरुको दक्षता र अनुभव क्षेत्रको कुरा हो । यस अर्थमा जमराले कलेजोको रोगीलाई फाइदा गर्दैन भन्ने उहाँको चेतावनीलाई कदापि वेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि जमराको जुसले कुनै फाइदा चाहिँ गर्दै गर्दैन । विश्वमा जमराका बारेमा धेरै खोजअनुसन्धानहरु भएका छन्, त्यसमा पाइने फाइदाजनक तत्त्वहरुका बारेमा धरै विमर्शहरु पनि भएका छन् । हामीले विभिन्न स्रोतहरुबाट संकलन गरेका जमराका जुसका फाइदाजनक पक्षहरुबारेमा पाठकहरुसमक्ष केही जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
तर ख्याल गर्नै पर्ने कुरा के हो भने, यो अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाएको तथ्य मात्रै हो, यसले कुनै खास अमूक रोगमा फाइदा वा औषधिकै रुपमा काम गर्छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु चाहिँ गलत नै हुनेछ । त्यसैले, यसलाई पोषक खाद्यतत्त्वको रुपमा आम रुपमा ग्रहण त गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि रोगको उपचार वा औषधिकै रुपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपूर्व चाहिँ आफ्ना चिकित्सक वा उपचार गरिरहेका डाक्टरसँग अनिवार्य रुपमा यसको सेवनका बारेमा राय सल्लाह लिन हुन हामी अनुरोध गर्दछौं ।
यति भनिसकेपछि आउनुहोस्, हामी जमराको जुसमा पाइने उपयोगी तत्त्वहरु तथा तिनले गर्ने फाइदाका बारेमा चर्चा गरौं । स्मरण रहोस्, जमरा विभिन्न अन्नहरुबाट बनाउन सकिन्छ । तर यहाँ हामीले चर्चा गरेको जमरा चाहिँ अन्यथा उल्लेख भएबाहेक गहुँको जमराको जुस हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु उचित हुनेछ ।
जमराको जुसमा उच्च मात्रामा भिटामिन ए,ई र बि रहेको हुन्छ । यसमा खनिज साथै विभिन्न तत्वहरु पनि समाबेश भएका हुन्छन् । जस्तै : क्याल्सियम, फोस्पोरस, सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, आयरन र जिङ्क ।
जमराको जुसमा महत्वपूर्ण आठ एमिनो एसिडका साथै बाह्र एमिनो एसिड पनि पाइन्छ । जस्तैः फेनिलालाइनाइल, वेलिन, थ्रेओनाइन, ट्रायप्टोफान, आइसोल्यूसीन, मेथियोनीन, ल्यूसीन र लाइसीन आदि । ती महत्वपूर्ण एमिनो एसिडहरु जसलाई हाम्रो शरीरले बनाउन सक्दैन तिनिहरुलाई कुनै आहारको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
जमराको जुसलाई स्वपाचन खाना मानिन्छ । यसमा रहेको प्रोटिनलाई तोड्नको लागि कुनै इन्जाइमको आवश्यकता पर्दैन । जमराको जुसमा एमिनो एसिड र ग्लुकोज दुवै हुन्छन् । त्यसैले यो शरीरमा सजिलै समाहित हुन्छ ।
जमराको जुस क्लोरोफिलले भरिपूर्ण हुन्छ । क्लोरोफिलमा मानिसको रगतमा भएको हेमोग्लोविन अणुको लगभग समान आणविक संरचना हुन्छ । जमराको जुसमा भएको क्लोरोफिलले रगतलाई सबै कोशिकामा अक्सिजन पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।
क्लोरोफिलले कलेजो, सिरा र कोशिकाको साथसाथै रगतलाई पनि शुद्ध गराउँछ । जमराको जुसले लीड, पारो, एल्मुनियममा हुने विषाक्त तत्वहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ जो शरीरको नसाहरुमा सङ्ग्रहित हुन्छन् । पेटमा असर गर्ने तत्वहरुलाई हटाएर जमराको जुसले असर कम गर्न सहायता गर्दछ । यसले शरीरको प्राकृतिक स्वउपचार प्रक्रियामा सहायता गर्ने कारण सङ्क्रमण विरुद्ध लड्न पनि मद्दत गर्दछ ।
जमराको जुसमा रहेको पोषक तत्वको विश्लेषण
‘ह्युटग्रास न्युट्रिस्नल एनालाइसिस रिपोर्ट वाई द अप्टिमम हेल्थ इन्सिच्युट अफ सान डियोगोे’ का अनुसार जमराको जुसमा निम्नानुसार पोषक तत्त्वहरु पाइन्छन्ः
मुल पोषक तत्व
जमराको जुसमा क्यालोरी २१.०, पानी ९५ ग्राम, चिल्लो ०.०६ ग्राम, कार्बाेहाइडेट २.० ग्राम, डायटरी फाइबर ०.१ ग्राम, क्लोरोफिल ४२.२ माइक्रोग्राम, कोलाइन ९२.४ माइक्रोग्राम, ग्लुकोज ०.८० ग्राम पाइन्छ ।
आइरन ०.६१ मिलिग्राम, म्याग्नेसियम २४ मिलिग्राम, पोटासियम १४७ मिलिग्राम, फस्पोरस ७२.२ मिलिग्राम, जिङ्क ०.३३ मिलिग्राम, क्याल्सियम २४.२ मिलिग्राम, सोडियम ३०.३ मिलिग्राम, सेलेनियम १ पिपिएम भन्दा कम पाइन्छ ।
जमराको जुसमा विभिन्न भिटामिनहरु पाइन्छन् । जस्तै : भिटामिन सि ३.६४ मिलिग्राम, भिटामिन ए ४२७ आइ यु, भिटामिन बि वन ०.०८ मिलिग्राम, भिटामिन बि टु ०.१३ मिलिग्राम, भिटामिन बि थ्रि ०.११ मिलिग्राम, भिटामिन बि फाइभ ६.० मिलिग्राम, भिटामिन बि सिक्स ०.२ मिलिग्राम, भिटामिन बि टुवेल १ माइक्रोग्राम भन्दा कम, भिटामिन ई १५.२ आइ यु, फोलिक एसिड २९ माइक्रोग्राम पाइन्छ ।
कति पिउनुपर्छ जमराको जुस ?
जमराको जुस धेरै पिउनु हुदैन । दिनको दुईपटक ६० मिलिलिटर जमराको जुस पिउनुर्छ । यदि तपाई पहिलो पटक जमराको जुस पिउन सुरु गर्नुभएको छ भने विस्तारै पिउनुपर्छ । एकैपटक धेरै पिउनु हुदैन ।
१५ मिलिलिटर अथवा ३० मिलिलिटर पिउनु राम्रो सुरुवात हो । आफ्नो शरीरको क्षमतालाई बुझ्नुपर्छ र सोही अनुसार पिउनुपर्छ । ६० मिलिलिटर भन्दा धेरै पिउनाले कुनै वास्तविक लाभ हुदैन । तपाईको शरीरले थोरै मात्र जमराको जुसलाई सहन गर्न सक्छ ।
जमराको जुस एक रोग निदानात्मक तत्व
जमरा प्राकृतिक रुपमा उत्कृष्ठ रोग निदानात्मक तत्व हो । ३० एम. एल जमराको जुसले १ केजी शुद्ध तरकारीमा हुने भिटामिन, खनिज र आवश्यक बराबरको तत्त्व दिन्छ । यो स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसलाई मात्र होइन, यसले स्वस्थ मानिसका साथसाथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन मद्दत गर्दछ । यदि तपाई पिउने मौका पाउनु भयो भने यसको फाइदा आफै थाहा पाउनुहुनेछ ।
यो जुसले राता रक्तकोष बढाउन मद्दत गर्छ र उच्च रक्तचाप कम गराउँछ । यसले रगतका सााथसाथै शरीरका अङ्गहरु पनि शुद्ध गराउँछ । यसले शरीरमा अम्लिय पदार्थ निकाल्ने आन्द्रालाई सफा गराउँछ । शरीर कार्यक्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले रगतलाई बढाएर ब्लड प्रेसर घटाउँछ र रगत हिड्ने बाटोको अबरोधलाई कम गराउँछ ।
यसले रगतमा क्षारीय तत्व भण्डारण गर्न सहयोग गर्दछ । यो जुसमा रहने क्षारीय तत्वले रगतको अम्लियता कम गर्दछ । यसले अल्सर, कब्जियत, झाडापखाला कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
यसले हाम्रो कोषको क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ । कलेजोमा हुने विषाक्त पदार्थलाई कम गराउँछ । रक्त सञ्चारमा मद्दत गर्दछ र जैविक वायु प्रदुषणबाट हुने असरलाई कम गर्दछ । काटेको, दर्फराएको, धावकको खुट्टाको पीडा, किराले टोकेको, पोलेको, अल्सर, ट्युमर आदिलाई कम गर्दछ ।
भर्खरैको नयाँ अध्ययनमा के देखिएको छ भने जमराको जुस ट्युमरबाट देखिने असरलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ र कोष नष्ट हुने प्रक्रिया कम गराउँछ ।
Jan. 28, 2019, 12:55 p.m. Uttam Niraula
Are youadoctor? How do you claim this?